Cumbre Vieja volcano – Mega Tsunami inogona kurova Brazil, Caribbean, USA munguva pfupi iri kutevera Urgent! – JucelinoLuz
Yakagara kwemakumi emakore, gomo reCumbre Vieja, riri pamhenderekedzo yekondinendi ye Africa, richakonzera kunetseka kuzviremera nekuda kweruzivo rwakapihwa naJucelino Luz kubvira 2005, apo chirevo ichi chaive pachirongwa chaJoão Inácio Show – chirongwa chine vateereri vazhinji mu kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva, vachitsanangura mamiriro ezvinhu aCumbre Vieja, panguva iyoyo volcano caldera yakanga ichiri kuzadza uye paizogona kuve nekuputika pakati pegore ra2013 kusvika 2018, zvisinei, mutsamba dzake akagamuchira rumwe ruzivo rwekuti chiitiko chine njodzi ichi chinogona kuchinja uye zviratidzo zvaizoitika. kupihwa pakati pe8 am Gunyana 20, 2021; nekuti kudedera kuzhinji kwaizoitika padhuze neCumbri Vieja Volcano, uye zviratidzo zvekuputika kweichi chakaputika gomo – zvichanetsa Brazil nenyika. Izvi zvinodaro nekuti, yakatanga kuratidza zviratidzo zvekuita – sekuratidzwa kwatsamba yakanyorwa nemuporofita Jucelino Luz musi waGumiguru 12, 2012 – uye, mutsamba iyi yakataura, kuti kana munaGunyana 2021, kana zviitiko zvegomo zvakapfuurira ku kushanduka kusvikira kuputika, zvinokwanisika kuti chikamu cheBrazil, Carribean, USA, uye zvikamu zvakati wandei zvepasi zvinokanganiswa semhedzisiro yechiitiko chekudengenyeka kwenyika.
Volcano iri pasi pekuchenjerera inogona kukonzera tsunami yaizosvika kuBrazil nedzimwe nyika, zvinonyevera chiporofita.
Zvakawanda zvinoputika gomo muAtlantic nekuda kwemhedzisiro inogona kuputika inogona kukonzera kunyangwe kumakondinendi akavakidzana uye ari kure, iyo Cumbre Vieja.
Sekureva kwechiporofita, mutsamba dzakatumirwa kuzviremera zveSpain, ivo vakasimudza nhanho yekuchengetera kuputika – uye, kana zvikadaro, mega tsunami inogona kukonzerwa.
Munguva yemakore ayo mazhinji ekusaita basa, nhanho yekuchengetera yakapihwa Cumbre Vieja yaive padanho rakasvibirira, uye ichasimudza mwero uyu kuita yero, zvisinei, zviremera zvinoratidza kudikanwa kwekuita kwekudzivirira nekuda kwenjodzi ine mwero yekuita kwemakomo. Ruzivo rwapihwa mune fungidziro dzaJucelino Luz.
Pamusoro peaya mazinga, pane mamwe maviri: orenji, iyo inoratidza yakanyanya kuchenjerera kune zviitiko zvinotangira kuputika, uye tsvuku, izvo zvinoreva chimbichimbi nekuda kwekuramba kuchiputika. Kana izvi zvikaitika, nyanzvi dzine fungidziro nezve zvingangoitika zvine njodzi – uye imwe yadzo inosanganisira ese maAmerica, uye nyika dzinoverengeka pasi rose, kunyanya zvichikanganisa zvikamu zveBrazilian Coast, Caribbean neUSA.
Imhaka yekuti, kana iyo Cumbre Vieja yakave nekuputika kukuru, izvo zvinoshamisa zvinogona kukonzera tsunami iyo inogona kukanganisa chero nzvimbo yemahombekombe yakashambidzwa neAtlantic. Mutsamba dzakaburitswa uye dzakatumirwa makore apfuura, akataura kuti gungwa rese reBrazil – kubva kuRio Grande do Sul kuenda ku Amapá – pamwe neCaribbean neUSA, vanogona kutambura mhedzisiro yechiitiko chakadai, uye nzvimbo mbiri dziri panjodzi huru .
Kubva 2005, Jucelino Luz anga achisimbisa kuti vagari vese vemumahombekombe vanofanirwa kuziviswa, kunyanya kuchamhembe nekuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweBrazil, nzvimbo dziri muCaribbean, USA, sezvo dzingave dzakanyanya kubatwa, uye nekudaro tinodzivirira kukuvara kwevanhu – ponesa hupenyu uye uvadzivirire – chikamu chemabasa angu emweya.
Iyo Cumbre Vieja volcano, iri pachitsuwa cheLa Palma, Spain, ichaenda kunochenjerera pazero reyero munaGunyana 2021.
Muzvinafundo Jucelino Luz – muongorori, anokurudzira, munyori, muratidziri, wezvemamiriro ekunze uye gwara remweya